एकपाते सुइरोमा विदेशी मख्ख « प्रशासन
११ पुस २०७६, शुक्रबार
फिदिम । पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिका वडा नं ३ स्थित पाथीभरा चिया बगानको चिया प्रतिकिलो रु ५ हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । प्राङ्गारिक प्रमाणित भइसकेको यहाँ उत्पादित चियाको ठूलो हिस्सा युरोपका विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ ।
आफ्नो स्वादअनुसारको चिया खरीद गरी लैजान तथा यहाँको चियाको अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार गर्न युरोपेली विभिन्न मुलुक तथा छिमेकी मुलुक चीनका नागरिक यहाँ आउने गरेका छन् । उनीहरुले यहाँबाट चियाको नमूना सङ्कलन गरी लैजाने, उपयुक्त मूल्य निर्धारण गर्ने र चिया खरीद गरी लैजाने गरेको पाथीभरा टी स्टेट प्रालिका अध्यक्ष उदयकुमार योङ्याले जानकारी दिए । फ्रान्स, जर्मनी, चेक, रुस, चीनलगायत मुलुकका नागरिक तथा व्यापारी यहाँ चियाबारे बुझ्न, चिया खरीद गर्न तथा घुम्न आउँछन् । कतिपय युरोपेलीले यहाँ दुईतीन हप्तासम्म समेत बिताउने गरेको अध्यक्ष योङ्याको भनाइ छ ।
पाथीभरा चिया बगानको चिया विदेशीका लागि सबैभन्दा प्रियकर छ । यहाँको एकपाते सुइरोबाट उत्पादन हुने चियामा विदेशी औधि सन्तुष्ट हुने गरेका छन् । संसारमै एकपाते सुइरोबाट बनेको चियालाई सबैभन्दा स्वादिष्ट मानिन्छ । विदेशीले यहाँबाट आफ्नो तथा आफ्ना ग्राहकको स्वादअनुसार चिया उत्पादन गर्न लगाई विदेश लैजाने गरेका छन् । उनीहरुले चियाको स्वादका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । यहाँको चिया प्रतिकिलो ३० देखि ४० युरोसम्ममा बिक्री हुने गरेको योङ्याले जानकारी दिए । पाथीभरा टी स्टेटको चिया हिमकोप नामक कम्पनीले समेत विदेशमा बिक्री गर्दै आएको छ ।
नियमितजसो विदेशी पर्यटक आउने पाथीभरा चिया बगान रहेको चरीभञ्ज्याङ क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण रहे पनि यहाँ पर्यटकका लागि आवश्यक न्यूनतम संरचनासमेत निर्माण हुन सकेका छैनन् । पर्यटकलाई यहाँ खाने, बस्ने उचित व्यवस्था छैन । सरकारी निकायले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न उचित चासो नदिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । सरकारी बेवास्ताका कारण स्थानीयवासीले समेत यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लगानी गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।
योङ्याले पर्यटकको बसोबास तथा खानपिनका लागि चरीभञ्ज्याङमै आवास निर्माण गरी सुविधायुक्त कोठा निर्माण गरिरहेका छन् । ‘म आफैँले पर्यटकहरु भित्र्याउने न्यूनतम पूर्वाधार बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छु । अरुलाई पनि पर्यटकहरुको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसैबाट लाभ लिने प्रबन्ध गर्न उत्साहित गरिरहेको छु’, अध्यक्ष योङ्याले भने । केही सुविधा दिन सकिने र केही आकर्षक प्रकारका घर निर्माण गर्न आफूले सबैसँग आग्रह गर्दै आएको योङ्याको भनाइ छ । जिल्लामै पाथीभरा चिया बगान क्षेत्र सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक आउने, बस्ने तथा घुमघाम गर्ने क्षेत्र मानिन्छ । याङ्वरक गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष मविन्द्र योङ्या चरीभञ्ज्याङ जिल्लामै पर्यटकीय दृष्टि पृथक र विशेष महत्वको रहे पनि उचित र पर्याप्त लगानी हुन नसकेको गुनासो गर्छन् ।’चरीभञ्ज्याङलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छु तर पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन’, उनले भने ।
चिया उत्पादनमा सधैँ कामदारको अभाव खड्किने गरेको छ । चिया टिप्ने, गोडमेललगायत कार्य वर्षमा नौ दश महिना हुन्छ । पाथीभरा टी स्टेट प्रालिले सरदर ३० जनालाई आफ्नो चिया बगानमा रोजगारी दिएको छ । रोजगारी पाउनेहरु अधिकांश स्थानीयवासी छन् । उनीहरु खेतीपातीका याममा आफ्नै खेतीमा व्यस्त हुन्छन् । ‘आफ्नो खेतीको काम नसकी कुनै पनि कामदार यहाँ आएर काम गर्नुहुन्न । चिया बगानले सधैँ रोजगारी दिन सक्दैन । उनीहरु नआउँदा यता चियाको काम गर्न ढिला भइसक्छ ।
यसले चिया उत्पादनमा समेत असर पारिरहेको छ’, प्रालि अध्यक्ष योङ्याले भने । कामदार पर्याप्त नहुँदा चिया हुर्किएर जाने, टिप्न नभ्याइने जस्ता समस्या हुने गरेका छन् । चिया बगानलाई याममा करीब ४० कामदार आवश्यक पर्छ । यहाँ विद्युतीकरण हुन नसक्दा जेनेरेटरमार्फत चिया उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ । जेनेरेटरको प्रयोगले चिया उत्पादन महँगो पर्ने र यसको सोझो असर उत्पादकलाई हुने प्रालि सञ्चालकको गुनासो छ ।
पाथीभरा टी स्टेट प्रालिले ब्ल्याक टी (कालो चिया), ह्वाइट टी (सेतो चिया), ग्रीन टी (हरियो चिया) लगायत चियाका जात उत्पादन गर्दै आएको छ । यहाँबाट वर्षेनी करीब साढे सात हजार किलोग्राम चिया उत्पादन हुने गरेको पाथीभरा टी स्टेट प्रालिका अध्यक्ष योङ्याले जानकारी दिए । यहाँबाट सबैभन्दा बढी ब्ल्याक टी उत्पादन हुने गरेको छ । याङ्वरक –३ ओयामस्थित पाथीभरा चिया बगान जिल्लाकै ठूलो चिया बगानमध्येको एक हो । याङ्वरक– ३ तथा छिमेकी फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं. २ मा अवस्थित यस चिया बगानको आफ्नै करीब एक हजार दुई सय रोपनी जमीन छ । सोमध्ये करीब आठ सय रोपनीमा चिया रोपण गरिएको छ ।